URutger Bregman ufuna umbuso wobumbano lwe-UN: Martin Vrijland
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-1 December 2019	• 8 Amazwana
URutger Bregman, manje ongumlobi owaziwa umhlaba wonke, ngenxa yenkulumo yakhe kwiForamu Yezomnotho Yomhlaba, wenze izitatimende ezimangazayo engxoxweni esanda kwenziwa. Imvamisa uma umuntu ethola ukunakwa kwabezindaba okungaka, sisebenzelana nomuntu odlulela phambili i-ajenda ngemuva komaskhi womgxeki onozwela. Siyabona ukuthi eGreta Thunberg, sikubona lokho eRutger. Manje sesikwazi lokho ngeGreta Thunberg umkhulu wakho omkhulu wasungula inkolelo-mbumbulu yokufudumeza komhlaba futhi wazuza yena ngomklomelo kaNobel, ngoba wayengumsunguli wesikhungo leso semiklomelo. USenee Arrhenius akagcinanga ngokuzivuza ngeMklomelo kaNobel, kodwa nabangane bakhe. Isayensi ngaleso sikhathi yayivele iyindaba yokuthanda ukukhetha hhayi iqiniso.
Okuphawulekile ngale ndodana kamfundisi, uRutger Bregman, ukuthi ukhuluma kahle kakhulu futhi akumangalisi ukuthi wakhethelwa lelo khwalithi lofuzo ukuze avunyelwe ukusebenza njengomphathintambo wethelevishini kanye ne-podcast yesonto lesimo sezulu futhi aqashe amakholwa amaningi .
Engxoxweni kwiwebhusayithi zwijgenisgeenoptie.be URutger wenza izitatimende eziphawuleka kakhulu. Eqinisweni, ufuna umbuso wobushiqela obeka izinyathelo ezinzima ezivela phezulu. Ngomcabango wakho, ngithayiphe umbhalo wesandla wale ngxoxo engezansi. Ukubuka ividiyo, okokuqala kufanele ushiye ikheli lakho le-imeyili kuleyo webhusayithi futhi likwenze ube yisisulu sabavangeli abashisekayo balelo bandla elisha.
Funda lapha ngezansi okukusongelwa nguRutger ngamazwi amahle omfundisi futhi uvumele uthule uqonde lokho okushiwoyo empeleni:
Ngokushintsha kwesimo sezulu, konke kuguquka futhi ngilwa nakho kakhulu lapho ngithembeke kakhulu. Ngakho-ke nginomdlandla kakhulu ngalezo zinhlaka zezakhamizi, amabhajethi ezakhamizi. Ngicabanga ukuthi kuyamangalisa okwenziwe nguDavid. Futhi akuyona yonke into ephumelelayo, kepha kuhle kakhulu ukuzihlola kulolo hlanga; kwenzeka kakhulu. Uma ucabanga ukuthi iningi lezakhamizi zivele zifune ukufaka isandla okuthile futhi zingaba nokuqamba, kwakheke futhi uma uzinikeza ukufinyelela kochwepheshe. Kuyamangaza ngempela lokho! Futhi uma okuthile ikhambi lokugxeka, kumane nje: ukuba khona lapho kanye.
Futhi ngasikhathi sinye into ekhohlisayo, uma ukhuluma ngokushintsha kwesimo sezulu, yiphuzu lokuthi asinasikhathi. Asinaso nje isikhathi. Siphuthume impela, shesha, shesha. Ngakho-ke i-IPCC, ososayensi bezulu be-UN, bathi: “Uma ufuna ukuhlala ngaphakathi kwesigamu nesiqingatha? Yebo, kumele wenze izinto ezingakaze ziboniswe ngaphambili ngesikhathi sokuthula. " Ngemuva kwalokho kufanele unqanyulwe ku-2030, emhlabeni jikelele kokukhipha kwakho; I-2050 kumele ibe zero. Futhi ukuze sithole ama-degree amabili .. yebo izinto kufanele ziguquke ngempela.
Futhi le nto. Unaleso ncazelo esidumile esivela ku-Oscar Wild, owathi: "Inkinga yonke yobusosayensi ukuthi kuthatha ubusuku abaningi kakhulu." Kuthatha isikhathi esiningi. Futhi ngikhathazekile ngalokho. Ngikhathazekile impela ngalokho. Ukuthi sinesikhathi ngokushintsha kwesimo sezulu.
Uma ubheka ukuhlanganiswa kweMelika ngesikhathi sempi yezwe yesibili. Lokho ukuqhathanisa okwenziwe yizishoshovu zesimo sezulu ezungeze itheku; van: “Kufanele sikwenze lokho. Ukuhlanganisa izimboni. Yebo, lokho akusebenzanga ngamaphaneli ezakhamizi. Awungeke ukwenze lokho ngokuqamba ngokuqagela kwengqondo ezingeni lasendaweni, uyazi. Akuzange kusebenze ngaleyondlela. Lokho bekuphezulu phezulu! Ukugqugquzelwa okunzima kobuchwepheshe kwe-White House kanye nomongameli uRoosevelt abayishayile. Futhi-ke, uma ungahlanganyelanga njengesakhamuzi noma njengebhizinisi, wajeziswa! Lokho kuyahlanganisa!
Futhi uma bonke abantu manje bememeza izifundazwe eziphuthumayo - uyazi, lokho kwenzeka emadolobheni amaningi futhi amazwe amaningana esekwenzile lokho-ke ngiyamangala: “Niyasibona ngempela ukuthi siyini isimo esiphuthumayo sangempela? ngu? Ngabe uyabona ukuthi kuyini ukuhlanganiswa kwangempela? ”Lokho akuyona ukuthi 'Sonke sihleli etafuleni eliyindilinga isikhashana futhi sicabangisisa kancane ngokuthi uzizwa kanjani nokuthi ngizizwa kanjani nokuthi sizophuma kanjani'. Lokhu kungenye into ngempela! Lokho kubalulekile!
Sibona lapha ubuso bangempela bezishoshovu zezulu ababiza bonke ukulalela ososayensi be-UN kuphela; labo ososayensi abathi i-CO2 iyimbangela yokushisa komhlaba, ngokungafani nososayensi abaphikisana nalokho, kepha bake babekelwa eceleni (bona lapha). Lokho ubuso beqiniso wukuthi empeleni uthi isikhathi sifushane kakhulu senqubo yentando yeningi futhi ngenxa yalokho kukhona uhlobo umthetho wempi ezweni lonke kumele kumenyezelwe.
In lesi sihloko Ngachaza ukuthi ubukhokho bekulokhu kuyindlela emnyama ebheke kobukhomanisi. Impela umbono wemali eyisisekelo, kaRutger, ubuye umqondo wobukhomanisi. Kulelo ndatshana ngichaza ukuthi lokho kuyisimangaliso esihle kanjani sobukhomanisi, kepha ukuthi izimiso ngaphansi kukahulumeni wobuchwepheshe (njengoba uRutger ekubiza kanjalo) zihlala ziphumela kanjani (ekuthembekeni) ukubeka ngokuphelele intando yombuso. Lokho akuyona ubuchwepheshe; lokho ukuthatheka. Ngakho-ke ngincomela ukuthi usifunde ngokuphelele lesi sihloko ngaphansi kwalelo sixhumanisi.
Abavangeli bebandla lesimo sezulu babeka wonke umuntu obheka kabi lolu daba ngaphansi kwegama elithi 'cynicism' noma 'abaphikisi'. Uhlobo olungakwesokudla luphinde luxhumeke kalula kuleyo filosofi, ukuze abantu (abanjengo kuchazwe lapha) maduze, uma umnotho uqhuma, ngenxa yezinxushunxushu zenhlalo, lelo qembu lingasebenza ngokufana. Iqembu elinophawu lelo bese liyagcotshwa bese likhanywa, ukuze liqondise kamuva amakamu okufundela kabusha ukunyamalala. Eqinisweni, uRutger Bregman ubiza lokhu ngqo ngokubhekisisa kwakhe noMongameli Roosevelt kanye nesijeziso esinzima sanoma ngubani ongazange abambisane.
Siphokophela ekufezekiseni gulag yedijithali yomhlaba wonke, lapho isenzo ngasinye, konke ukusetshenziswa nayo yonke ifilosofi kubhekwe kuye ngemodeli yaseChina. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi kubukeka kanjani? Bese uqhafaza lapha.
Encwadini yami entsha ngichaza ukuthi singawumisa kanjani umbhalo omkhulu ongaziwa. Kungcono ukuthi uhlole kulokho.
Ukufakwa ohlwini kwezixhumanisi: zwijgenisgeenoptie.be
Inhlamba 'yabaphikisi bezulu' ixhumene nemibono yokuqamba amanga, ezombusazwe ezihambisana namaphiko nemizwa yesitray
Amakhamera we-Smart ezinkundleni zebhola alandelela umphakathi wamasu we-Chinese?
Amathegi: Bregman, i-communism, wobushiqela, isazi sobuntatheli, u-fascist, afakiwe, geen, global, interview, IPCC, is, isimo sezulu, ukuguquka kwesimo sezulu, inketho, podcast, Roosevelt, Rutger, ubuchwepheshe, ividiyo, ukushisa, isayensi, ososayensi, athule
1 December 2019 ku-13: 27
I-Fascism ingumbono wepolitiki osuselwa ekugunyazeni, onobuzwe obunamandla kanye nombono wobudlova obunamandla wokulwa. I-Fascism ithwala ngokuyinhloko umbono wobumbano ngokungahambisani nombono wobusosayensi, obuqondiswe ekwaneliseni izidingo, amanani nezinhloso zezimali nezinhlangano, ukuhlela umnotho kanye nohlelo lwezepolitiki ngokwalo ajenda.
Uhulumeni wama-fascist uvimba ngokuqinile noma yikuphi ukuphikisana nemibono yawo futhi ngokujwayelekile uzochoboza noma yikuphi ukunyakaza okuphikisana nakho. Ngokuhambisana nesimo sabo sokulwa, ohulumeni be-fascist ngokuvamile babheka udlame nempi njengezivuselela umoya kazwelonke namandla.
1 December 2019 ku-14: 00
Isibonelo esihle kakhulu esivela kuRutger ukufaka iKhazar Roosevelt; indoda eyayinebhomu le-athomu, eyakhelwe enye i-Khazar JR Oppenheimer, yaphonswa eJapan, eyayinesivumelwano neJalimane, okwaphoqa ukuthi iGermany isabele futhi ngaleyo ndlela yadonsela iMelika kwiMpi Yomhlaba, ngokwesu lomndeni wakwaKhazaren Mountbatten (iWindsor) noWinston U-Churchill, indodana ka-Rastschild oyisiphalaphala, ekugcineni owafuna ukwehlisa amaJalimane.
Babesevele benze amaRussia 'mancane'; I-Bolshevism ixhaswe ngabakwaRothschild namaRockefellers futhi yabulala ngesihluku amanye amaRussia amaRandi angamaRandi angama-70 (ngani?) Ngokunikeza lawo 85% Amandla nezikhali zaseSouth Russian Ashkenazi.
Amafutha oLwandle lweCaspian antshontshiwe, futhi manje asebenza njengamakholoni ePalestine nezisulu zamaJuda asephinde azingelwa nguHitler, futhi ngaleyo ndlela anikeze ukufinyelela eMiddle East, manje eseyaziwa njenge 'flat'. Kuhle Rutger!
Manje bonke labo mhlophe ababhuqiwe baxosha umhlaba wabo, okwenza isomiso nemililo yehlathi kanye nokugawula izingodo; okubizwa ngokuthi 'Isiteshi seRadar' kukuyo yonke indawo 'ukukala' isimo sezulu. Ukuthi lezi ziguqulwe zaba ngamadivayisi wokushintsha kwesimo sezulu angathumela 'imvula' olwandle ngokushesha, noma empeleni ungazithumela ezitsheni emhlabeni nokunye, manje sezingatholakala yonke indawo kuwe-tube ne-intanethi.
Vele senze ukuhlaziya ngomlilo omkhulu wasehlathini e-Australia. Zonke iRadar zisogwini, ukugcina imvula ingekho emhlabeni.
I-Bolshevism entsha, iHolomodor entsha, ukuQothulwa Kwesizwe okusha manje kwenzeka ngokuxhaphaza imvamisa, "kuqondiswe amandla okusebenzisa amandla," ulwazi olubekelwe emanyuvesi ajwayelekile (ngoba ungalusebenzisa futhi ukuthola ugesi emoyeni, ekhaya ngalinye) , mahhala). Kuphi i-5G nakho konke lokho okungenamsoco okuhlanzekile okufanele kwenziwe umhlaba 'uhlanzeke' futhi 'kube ngumKhomanisi' we-la Mao ngokugobeka ngemisebe ethola imisebe. Ngibonga amademoni njengoRutger.
I-Rutger; noma ungawazi umlando, noma ukhokhelwa kakhulu, noma ngabe usenkolweni efanayo yokuhlanya ebilokhu ikopela umhlaba amakhulu eminyaka. Kepha ngeke kusebenze. Kusekhona "umoya" ngemuva kwayo yonke le ndaba; futhi 'uqedile' ngawe.
Ngibonga futhi uMartin Vrijland, ngokuvula amehlo okukhulu ngalolu hlobo 'lwabasebenzisi bezwe'.
1 December 2019 ku-14: 14
Wamukelekile futhi uyabonga ngokungezwa kwakho.
Futhi uma iwebhusayithi "zwijgenisgeenoptie.be" i-movie ivaliwe noma ishintshiwe, khona-ke senginayo ukulandwa kwamanje. Ilungisiwe futhi kufanele icace ukuthi inhloso yayo yini; noma ngabe uRutger ngokungangabazeki uyosinika ukusonta noma simane nje singaphenduli.
Ngokuphathelene nalezo zikhali zamandla eziqondisiwe noma i-HAARP, empeleni lokho kuyinto abantu abaningi abayikhipha njengethiyori yecala lobumbano. Okuhlaba umxhwele kakhulu ngumbuzo wokuthi ngabe leyo mililo yehlathi ayikhona yini unyaka nonyaka nokuthi mikhulu kangako kunesilinganiso. Uyacelwa ukuthi uqaphele: sithola lolo lwazi (mayelana nemililo ebanzi yemililo yehlathi) kusuka kwabezindaba ngakho-ke akukho lutho oluqinisekile.
Kuyaqiniseka ukuthi ukuxubana ngokobuhlanga (kufaka phakathi ukuhlehla kobuhlanga obumhlophe noma yimuphi umjaho) kungenye yezinto ze-ajenda, njengokudideka kobulili kumuntu ongathathi hlangothi ngokobulili (osesithombeni sikaLucifer).
1 December 2019 ku-14: 41
Sicela ubhekane neqiniso elihlasimulisayo nabantu ababheka i-HAARP njengethiyori yokuqumba.
Ngivame ukuthumela lokhu ngaphansi kwezindatshana zesimo sezulu senhlanzeko.
Kusuka ku-1999, kusuka e-EU eBrussels, ubufakazi obungenakuphikwa bokuthi lobu buchwepheshe bukhona.
Skrolela phansi ukuya kwengxenye.
Funda kuqala leso siqeshana se-HAARP. Funda konke ngemuva kwalokho uma uzizwa uthanda.
1 December 2019 ku-15: 38
Ngubani oza lapho futhi athole ipulatifomu, elungele inhlama.
Uma ekwazi ukuhlala epaneli likaDavos futhi ajoyine imenenja yokuqonda iNieuwkerk DWDD ne-CNN ne-CBS khona-ke usuvele uyazi kancane ngakho. Angizibeki ngamabomu izixhumanisi ngoba leyo ndoda ayifanele izindlebe zokulalela.
Isihloko esikhanyisela kakhulu, ngiyabonga
1 December 2019 ku-16: 06
Yebo, uBregman uthi ungowasekhaya lamaProthestani.
Nginesiqiniseko sokuthi unendlu ehlukile. Qagela ukuthi kathathu.
1 December 2019 ku-17: 16
Okushiwo nguBregman ngobuchwepheshe busebenzisa ubuchwepheshe ukulawula nokucindezela inqwaba. Kudlulela ngale kwe-fascism, ubukhomanisi, njll. Kuyinhlanganisela yeminyakazo nemibono ehlukahlukene (yezepolitiki). Konke kususelwa ekucindezelweni, kuzothengiswa njengobukhomanisi ... enye i-icw engezwe ohlwini.
Isixazululo sobukhomanisi siyindlela eyingqayizivele ye-1812 Hegelian dialectic. [I-1] UHegel wathi ukungqubuzana phakathi kwabaphikisi ngokwemvelo kuholele isintu ekwamukeleni uhlobo lwefilosofi, ukuphelela kwamafilosofi. I-1848 Communist Manifesto yandisa ifilosofi yamaHegelian ekuthandeni izinto ezibonakalayo. Ukuxabana okungokwemvelo kukaMarxist phakathi kwabalobi nabangabinakho buthethelela umbhikisho nokubulawa kwabantu. Ishintshwe ku-1884 ukuze ifake isembozo, imisebenzi yokuvukela umbuso. Lokhu kaMarxist "kuphetha izizathu" zemibono. Imibono kaHegel kanye noMarx yiyona eyisisekelo semibono yesimo samaphoyisa kaStalin yaseSoviet-Russian kanye neNational Socialism kaHitler; bobabili babesebenzisa ama-eugenics ngokumelene “nabantu abancane.”
Ubukhomishani bezombusazwe kwethulwa emhlabeni njenge-The Way Way kuma-1990s. Ibizwa futhi ngentando yeningi ebambe iqhaza, ushintsho lwentando yeningi lomhlaba jikelele, i-bi-partisan, i-centrist, i-radical middle, iphakathi ngokulinganayo, ezomnotho, i-Glasnost-Perestroika namanye amagama angenangqondo (njengokucabanga komphakathi, okususelwa kuKholo, "umuzwa omusha wenhloso," njll. .). E-USA, ubukhomanisi bezepolitiki, imfundiso theory yasetshenziswa yiDemocratic Leadership Council (DLC) eyayixhaswe umhlaba wonke. Abanye bethu kungenzeka ukuthi bake bezwa lokhu kwaba "iqembu" likaClinton.
3 December 2019 ku-00: 35
imininingwane enhle kakhulu Riffian! Kubonisa futhi ukuthi luhlobo luni lohlelo lwe-luciferian esibanjiswa kulo, emcabangweni onengqondo, onomdlandla osebenza kahle, uthi, umphakathi onjengabantu abanjengo-rutger bregman ubengeke anikezwe isiteji sokukhipha inkohliso yakhe yokukhohlakala kwembulunga yonke. Okungenani lo mbumbulu we-soros wempendulo yokuqamba kufanele unikezwe ezingeni likazwelonke noma lamanye amazwe, kepha labo bantu abahluzekile ngokuqinisekile AKANIKELWA isiteji ngoba izingcezu zalo eziyisiwula ne-ajenda ye-'GREEN 'zizokhonjiswa ngalokho okuyikho, iQuatsch!
« Ukuphakanyiswa okukhulu kweSinterklaas: ukumangala okuhle kufakwe kahle!
Ubuchwepheshe be-Smart nokubusa umhlaba wonke kwezobuchwepheshe kuzosindisa isimo sezulu »
Ukuvakashelwa okuphelele: 15.886.936
UMartin Vrijland op Ngabe uhlelo lokulwa nezindiza e-Iranian olwehlise iBoeing 737-800 (indiza ye-PS752) lukhishwe?